Taariikhda astaanta Apple | Abuurista khadka tooska ah
Marka loo eego qiimeynta “Noocyada Caalamka ee ugu Fiican”, Apple wuxuu ku guuleystey inuu noqdo astaanta ugu fiican aduunka intii lagu guda jirey sanadkii 2014 waana mahad dhamaanteed mahadi ha ka gaartee hal abuurnimadiisa aduunka ee xisaabinta iyo daryeel gaar ah oo ficil ah, oo ay kula dhaqmeen oo ay ku ilaaliyeen astaanta iyagoo fiiro gaar ah u leh naqshadaynta warshadaha ee mid kasta oo ka mid ah wax soo saarkooda.
Waana in qaabeynta qaabdhismeedka isku mid ah, kan iibinta dukaamada Apple iyo dareenka gaarka ah ee ay siiyaan macaamiisha, ayaa u oggolaatay Apple inuu noqdo calaamadee lambarka koowaad adduunka oo dhan, iyadoo laga garanayo "in yar oo Apple ah”, Taas oo noqotay astaanteeda.
1 Abuureyaasha astaanta Apple
2 Laga soo bilaabo 1998 ilaa maanta
Abuureyaasha astaanta Apple
Waxay ahayd naqshad uu abuuray Ronald wayne yaa ahaa aasaasihii 3-aad ee Apple Computer, in kasta oo ay sanad qaadatay oo kaliya, maxaa yeelay Steve Jobs ma jeclayn haba yaraatee, maadaama ay aad u murugsanayd oo khatar ahayd, waxay ka koobnayd sawir Isaac Newton oo wax ku aqrinaya geed tufaax ah hoostiisa.
Kadib 2 usbuuc oo kulan ah oo kaliya tijaabada astaanta ayaa ku filneyd Rob janoff ka dhaadhiciyaan Steve Jobs oo taariikh ka dhigto dib u qaabeynta astaanta tufaaxa, taas oo si la yaab leh suuqa ugu dhici lahayd markii la bilaabay Apple II.
Iyada oo ku saleysan soo jeedinta Steve Jobs, Janoff, Waxaan fududeynayaa astaantii hore ee Apple oo loogu talagalay tufaax la qaniinay.
Waa naqshad aan gebi ahaanba xor ka ahayn halyeeyada magaalooyinka iyo macno kooban, qaabeyntaani waxay leedahay sheekooyin ka sheekeynaya in tufaaxu yahay matalaada tufaaxa sumaysan ee uu isku dilay. Alan Turing, xisaabiyaha iyo aabaha xisaabinta, ayaa sidoo kale la sheegay inuu haysto macna badan oo kitaabiga ah, sida tufaaxa geedka xikmada ee Xaawo qaniinto ama ku saabsan matalaada dhiiranaanta iyo jirrabaada, iwm.
Si kastaba ha noqotee, kuwan oo dhan aragtiyaha ayaa aad uga fog xaqiiqdaMaaddaama Apple aysan waligood xaqiijin midkoodna runtiina macnahooda runta ah waa mid qarsoodi ah oo xitaa hadda aan la garanayn, laga yaabee inay dhici karto inaysan midna lahayn.
Sida laga soo xigtay Janoff, kaliya Waxaan aaminsanahay qaniinyada tufaaxa si loogu kala saaro miisaanka iyo saamiga midhaha kale. Xaqiiqdii, astaanta asalka ah, tufaaxu wuxuu maareeyaa inuu la qabsado xarafka mahadsanid qaniinyada.
Steve Jobs doonayay inuu kombiyuutarada u soo dhawaado guryaha, Waxaan doonayay inay noqdaan kuwa aqoon badan, raaxo leh, xiiso leh oo soo jiidasho u leh caruurta yar yar markay iskuulladooda joogeen iyo tan darteed iyo xaqiiqda ah in Apple uu ahaa kombiyuutarka kaliya ee lahaa shaashadda midabka, waxay go'aansadeen inay midab ku daraan baararka astaanta.
Laga soo bilaabo 1998 ilaa maanta
Isbedelka ku dhacay astaanta Apple qaabkiisa iyo midabkiisaba waxaa la sameeyay 1998 oo bilaabay inuu tago monochrome, kaas oo si fiican ugu habboonaa ku soo noqoshada Apple Steve Jobs, imaatinka Jonathan Ive oo ah Madaxweyne Kuxigeenka Fulinta ee Naqshadeynta iyo bilowgii ugu horreeyay ee iMac G3.
Adoo samaynaya halbeegga astaanta wuxuu lahaa a dabacsanaan weyn, waana sababta loogu isticmaalay meelo kala duwan alaabada Apple, sida dhinacyada taalada PowerMac G3, dusha sare ee iMacs, iwm.
Isla sanadkaas, astaanta ayaa mar kale la fududeeyay iyadoo la abuuray nooc madow ah, kaas oo lagu beddelay 2001 astaantii lahayd muuqaalka cusub ee muuqaalka isticmaalaha garaafyada ee nidaamka hawlgalka. Mac OS X kaas oo loo yaqaanay Aqua.
Sannadkii 2007 astaantii waa la sharraxay waxaana hadda la fududeeyay mar kale inay noqoto cirro dhexdhexaad ah. Sidaas sidaad awooday inaad u fiirsato, astaanta ayaa isbedelaysa sannadihii la soo dhaafay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Taariikhda astaanta Apple
Sida ku xusan maqaalladaadii hore tani waxay noqoneysaa ISOTYPE ee ma ahan astaan.
Waad ku mahadsantahay qoraaladaada, waa kuwo aad waxtar u leh.
Jawaab Oscar León
Shan qalad oo looga fogaado macaamiisha Web Design